Dukaameysi Ujeeddo Badan Leh, Waad U Qalantaa | Duoduo
Gawaarida Dukaameysiga Ujeedada Badan, waad u qalantaa
Gawaarida wax iibsiga ee ujeeddooyinka badan leh, awoodda ballaaran, labadaba way fariisan karaan oo laabmi karaan, oo ay si qoto dheer u jecel yihiin macaamiisha!
Marka la wanaajiyo heerarka nolosha, shuruudaha dadka ee tayada nolosha ayaa sidoo kale sare u sii kacaya, taas oo sidoo kale si weyn kor ugu qaadeysa heerka isticmaalka. Dadku waxay aadaan supermarket-ka si ay wax uga dukaameystaan, waxay aadaan suuqa cuntada si ay cunto uga iibsadaan, isla markaana ay u soo iibsadaan alaabo badan hal mar. Haddaba su’aashu waxay tahay, sidee alaabtaas loogu raraa gaarigaaga? Xaqiiqdii, ma ahan wax adag. Waxaan kaliya u baahanahay gawaarida wax iibsiga si aan si fudud ugu xallino dhibaatadan, waxayna sidoo kale si weyn u kordhisaa raaxadayada wax iibsashada!
Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa gaari wax iibsi oo ujeedo badan leh oo fariisan kara isla markaana laaban kara isla markaana leh awood ballaaran, oo macaamiisha aad ugu caansan. Qoys kastaa wuu u qalmaa inuu yeesho sida dukaamaysiga casriga ah ee wax ku oolka ah, hubaal kaaliyahaaga saxda ah ee wax iibsiga.
Arag? Way fududahay in la laabo, si dhakhso ah isku laaban 5 ilbidhiqsi, gaadhigii wax iibsanayay ee duubnaa aad ayuu u yar yahay, boosna ma la qaadanayo, waana sahlan tahay in la qaado! Intaas oo kaliya maahan, Gaarigan dukaameysiga waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sanduuqa wax lagu keydiyo, hoos u dhigo kabaalka, sanduuqa wax lagu keydiyo waxaa si fudud loogu ridi karaa jirkeena gaariga, si gaarigaaga jirkiisa uusan mar dambe u jahwareerin. Laba giraangiradood oo caalami ah ayaa lagu daraa xagga hore ee gaadhiga wax iibsiga, si aan u riixno oo u jiidanno si loogu fududaado isticmaalka. Dabcan, uma baahnin inaan ka walwalsano gaadhigii wax iibsanayay ee hoos ugu sii siqayay jiirada marka aanu hoos u sii socono. Baabuurkeenu wuxuu leeyahay nashqad jebin, fadlan eeg sawirka hoose: